स्वास्थ्यमा बेथिति : एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू सहरका अस्पतालका ज्वाँई जस्तै हुन् ! - Dainik Nepal
विशाल पाण्डे २०७६ असोज ३ गते ९:०४
स्वास्थ्य मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति बेथिति अन्य क्षेत्रमा छ जस्तो लाग्दैन । विगत दश बर्षको अन्तरालमा च्याउसरि खुलेको अस्तालहरूले सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुको साटो उल्टो चुसिरहेका छन् । सरकारले पनि प्राइभेट अस्पतालका हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट निगरानी गर्न सकिरहेको छैन, जो अत्यन्तै आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सहरलाई केन्द्रित बनेर खोलिएका अस्पतालहरूलाई बिरामी पाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । प्राइभेट अस्पतालहरूले विभिन्न ठाउँमा दलालहरू खडा गरी त्यही दलालमार्फत बिरामीहरू मोटो रूपमा खरिद गरी आफ्नो अस्पतालतिर तानिरहेका पाइन्छन् । सहरमा दलालहरूले जुन अस्पतालले बढी पैसा दिन्छ, उही अस्पतालमा बिरामी पु¥याएर हिड्ने एम्वुलेन्सहरूको ठगी धन्धाको सञ्जाल ठूलो छ ।
एम्बुलेन्स सेवाको आवरणमा उनीहरूले बिरामी दलालको काम गरिरहेका छन् । सहरका अस्पतालहरूका लागि एम्वुलेन्स ड्राइभरहरू ज्वाइँ जस्तै हुन् ।
उनीहरूले जे–जे माग्यो त्यही–त्यही पुर्याउने काम प्राईभेट अस्पतालका सञ्चालकहरूले गरिरहेका छन् । यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप सुन्दैमा अनौठो लाग्ने गर्दछ । एउटा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई ललाइ–फकाइ प्राइभेट अस्पतालमा पुर्याउने काम ड्राइभर वा जो कोहीबाट भएमा उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
सञ्चालकहरू उपचारमा भन्दा पनि बढी पैसा र बिरामी कसरी ठग्न सकिन्छ भन्ने सोचाइतिर केन्द्रित भएका कारण आम सर्वसाधारणहरू प्राईभेट अस्पतालमा बेचिनुपरेको छ
प्रत्येक प्राइभेट अस्पतालहरूले बिरामी बेचबिखन गर्नका लागि अस्पतालमा मार्केटिङ विभागको स्थापना गरेका हुन्छन् । उक्त विभागले आफ्नो विभागको काम कर्तव्य भुलेर विभिन्न पृष्ठभूमिका दलालहरूसँग सम्पर्क बढाई कसरी बढीभन्दा बढी बिरामी खरिद गरी तान्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाइरहेका पाइन्छ । यो सरासर ठगी धन्धा हो ।
विशाल पाण्डे, लेखक
स्वास्थ्य उपचारका नाममा आम सर्वसाधारणहरू ठगिइरहेको कुरा कुनै नयाँ भने होइन । सरकारले पनि ठगी गर्ने अस्पताल र दलालहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । नयाँ प्राईभेट अस्पतालहरूले पर्याप्त मात्रामा चिकित्सकहरू, भौतिक संरचना र आवश्यक जनशक्ति निर्माण नगरी अस्पताल सञ्चालन गर्नाले कयौं सर्वसाधारणहरू ठगीमा परिरहेका छन् ।
प्राइभेट अस्पतालका सञ्चालकहरू उपचारमा भन्दा पनि बढी पैसा र बिरामी कसरी ठग्न सकिन्छ भन्ने सोचाइतिर केन्द्रित भएका कारण आम सर्वसाधारणहरू प्राईभेट अस्पतालमा बेचिनुपरेको छ ।
उपचारमा आपूm निकै दक्ष भनी घोषणा गर्ने कतिपय अस्पतालहरू स्वास्थ्य सेवाका लागि बरदान होइनन् भन्ने कतिपय घटनाहरूबाट पुष्टि भइरहेका छन् । दलालहरूबाट यस्ता अस्पतालहरूले प्रतिष्ठा गुमाइरहेका पनि छन् । सरकारले सुक्ष्म ढंगले छानविन गर्ने हो भने अस्पतालहरूको गलत व्यापार भण्डाफोर हुने निश्चित छ ।
आजको २१औं शताव्दीमा आएर आफ्नै देशका नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचारका नाममा बिक्री हुनु भनेको कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्णरूपमा असक्षम हुनु हो । सहरमा प्रायः प्राइभेट अस्पतालहरूले आईसीयू वार्डमा लामो समय बस्नुपर्ने बिरामी, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरू र क्यान्सर रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू किन खरिदबिक्री गरिररहेका पाइन्छन् ? विभिन्न बसले दुघर्टना गराएर बिरामी भएका मानिसहरू त प्राईभेट अस्पतालका लागि लैनो भैंसीसरह नै हुन् ।
अस्पतालको स्तर उन्नति गर्ने, उपचार सेवा स्तरीय दिनेलगायतका कामहरूमा उत्कृष्ट बनेका अस्पतालहरूलाई समेत बदनाम गराउने गरी बिरामी खरिद गर्ने दलालहरूले जनतालाई लुटिरहेका छन्
यस्ता बिरामीहरूलाई प्राइभेट अस्पतालले प्रायः लामो समय राख्ने र उसको उपचारको बिल पनि यातायात कम्पनीले तिर्ने भएकाले अत्यन्तै महँगो उपचार गरेका पाइएका छन् । प्रायः प्राईभेट अस्पतालहरूले आफ्नो सम्पर्क बढाई गाउँबाट पनि बिरामी खरिद गरी सहरमा उपचारका लागि ल्याएको पाइएका छन् । यस्ता बिरामीहरूबाट बिरामी पठाउने दलाललाई मोटो रकम दिई जहिले पनि आफ्नो स्वार्थमा अस्पतालहरूले राख्ने गर्दछन् ।
स्वास्थ्य उपचारमा आम सर्वसाधारण बेचिएको विषयमा सरकार मौन बस्नु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । यसरी बिरामी किनेर अस्पताल चलाउने सञ्चालकलाई कडा भन्दा कडा रूपमा कारवाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
अस्पतालको स्तर उन्नति गर्ने, उपचार सेवा स्तरीय दिनेलगायतका कामहरूमा उत्कृष्ट बनेका अस्पतालहरूलाई समेत बदनाम गराउने गरी बिरामी खरिद गर्ने दलालहरूले जनतालाई लुटिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भएको अधिकारलाई सीमित समूहको स्वार्थमा परेर बिचलित हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन् । यसरी गरिब निमुखा र असिक्षित बिरामीहरू किनबेच गर्ने दलालहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नु आवश्यक छ ।